﻿ वीपी प्रतिष्ठानमा अर्को लापरवाही: बच्चा हेर्न नपाइ गयो सुत्केरीको ज्यान
वीपी प्रतिष्ठानमा अर्को लापरवाही: बच्चा हेर्न नपाइ गयो सुत्केरीको ज्यान
शुक्रबार २२, असार २०७५
धरान । मलेसियाबाट बच्चा जन्माउन आएकी भोजपुर हतुवागडी ९ कि हिरा राईले बच्चा त जन्माईन्, तर बच्चालाई हेर्नै नपाई मृत्युवरण गरिन् । उपचार लापरवाहीका कारण आमाको मृत्यु भएको परिवारहरुले आरोप लगाएका छन् ।
धरान स्थित वीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको गाईनोलोजिमा भर्ना भएकी राईले सोही दिन बच्चा जन्माईन् । उनले न त आफ्नो बच्चालाई हेर्न पाइन्, न त स्तनपान गराउन नै । चिकित्सकको लापरवाहीले २० गते मृत्यु भयो ।
पाँच वर्षअघि देखि श्रीमान संगै मलेशियामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकी राई गर्भवती भए पछि माघमा उनी नेपाल आएकी थिईन् ।
२८ वर्षिय राईले १६ गते बच्चा जन्माईन् । अवस्थामा समस्या नदेखिएपछि चिकित्सकले एनआईसियुमा राख्नु पर्ने सुझाव दिए । प्रतिष्ठानमा एनआईसियु खाली नभएपछि बच्चालाई धरानस्थित विजयपुर अस्पतालको एनआईसियुमा राखियो ।
राईका आफन्तकाअनुसार नर्मल डेलिभरी भएकोमा अत्याधिक रक्तश्राव भएको थियो । जसका कारण अस्पतालले रगत चढाएको थियो ।
मृत्तक राईकी काकी निलम स्याङतान राईका अनुसार आमाको अवस्था पनि सामान्य थियो । ‘आफै खाना खाने, हिड्ने गर्न थालेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर १९ गतेदेखि ज्वरो आयो, हातखुट्टा पनि सुनिन थाल्यो, २० गते सुई लगाए पछि काम ज्वरो आयो, सास फेर्न गाह्रो भयो भनेर कराउन थाले पछि नर्सहरुलाई भने, तर नर्सहरुले अत्तालिनु पर्दैन भने ।’
तर बिरामीले च्याप्दै गएपछि २० गते मृत्यु भयो । गाईनोलोजिका कर्मचारीहरुले शव उठाउन हतार गर्न थालेपछि परिवारले शंका गर्न थाले । उनीहरुले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएसम्म शव उठाउन नदिने अडान लिएका छन् ।
यता प्रतिष्ठानले रगत अभाव भएकाले मृत्यु भएको जनाएको छ । प्रतिष्ठानका डेपुटी निर्देशक तथा गाईनोलोजी विभागका डा. पप्पु रिजालले कार्बनडाईअक्साईड बाहिरिने र अक्सीजन लिने रगतनलीमा रगत ढिक्का भएर बसेपछि फोक्सो हुँदै मुटु सम्म पुग्ने मेकानिज्मले काम नगर्दा मृत्यु भएको बताए ।
बच्चा जन्मिएपछि राईलाई अत्याधिक रक्तश्राव हुने पोष्ट पार्टम हेमरेज भएकाले उपचारका लागि वार्डमै राखिएको थियो । उनका अनुसार गर्भ बसेको समयदेखि नै प्राकृतिक रुपमा ब्लडको ढिक्काहरु बन्न थाल्छन् । त्यसले मुटुबाट फोक्सो सम्म अक्सीजन लिने र कार्बनडाईअक्साईड फ्याक्ने सानो नलीको मेकानिज्मलाई ब्लक गरिदिन्छ । जसले गर्दा मृत्यु हुने गर्दछ । सोही कारण मृत्यु भएको रिजालको भनाई छ ।
तर मृतकका आफन्तहरु भने मान्न तयार छैनन् । मृत्यु भएको केही मिनेटपछि नै मुख र नाकबाट फिँज आउन थालेको बिरामीका आफन्त बताउँछन् । मृतककी काकी निलमले भनिन्, ‘त्यती धेरै समस्या थियो भने बाँचेकै बेलामा किन भनेनन् ? त्यसको उपचार किन गरेनन् ?’
अहिले उनको शव प्रतिष्ठानको मर्चरीमा राखिएको छ । चिकित्सकको लापरवाहीले मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै राईका आफन्तले कारणबारे स्पष्ट नभएसम्म शव नबुझ्ने भन्दै सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।